သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ဗိုင်းရပ်စ်များ
"အခု Chemist တွေက Microbiology ကို လွှဲပေးနေတယ်"
"အင်းလေ Microbiology ကိစ္စပဲဟာ"
"အီးမေးလ်တွေ ၂မိနစ်တစ်ခါ စစ်ကြလေ"
"Nasopharyngeal Swab ယူပြီး BCCDC (BC Center for Disease Control) ကို ပို့ရမယ် မဟုတ်ဘူးလား"
"Nasopharyngeal Swab အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ယူလို့ မရဘူးဆိုရင်ကော"
"ရိုးရိုး throat နဲ့ nose culture ပဲပေါ့"
"Nasopharyngeal Collection ဆိုတော့ Pertussis Culture ယူတာနဲ့ တူတူပဲမဟုတ်ဖူးလား"
"ဒါပေမယ့် Viral Transport Media နဲ့ ပို့ရမှာ"
"ဆရာဝန်တွေ ဒီလောက်တော့ သိမှာပါ"
"သူတို့လဲ ဘာမှမသိဘူး၊ ဘယ်သူမှ မသိသေးဘူး၊ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ"
"၀က်ကစဖြစ်တာလို့ ဘယ်လောက်သေချာလဲ၊ ၀က်ကစတယ်လို့ မီဒီယာတွေပြောတိုင်း ၀က်တုပ်ကွေးဖြစ်ရိုးလား"
"၀က်ကို ဖာရင်ဟိုက် ၁၆၀ အပူချိန်နဲ့ချက်ရင်တော့ ရတယ်ပြောတာပဲ"
"ဖာရင်ဟိုက်၁၆၀ ရောက်မရောက် ဘယ်လိုသိမှာလဲ"
"ငါတော့ ၀က်ကို ရွံလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မစားဘူး"
"တစ်ယောက်က ၀က်တုပ်ကွေးစခေါ်တာနဲ့ အကုန်လိုက်ခေါ်မှာပဲလေ၊ ဒီနာမယ်ပဲ တွင်မှာပါ စောင့်ကြည့်"
"ဒီဗိုင်းရပ်စ်က လူထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့ flu virus၊ ၀က်ထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့ flu virus နဲ့ ကြက်ငှက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ flu virus အားလုံးရဲ့ DNA တွေပါတယ်
လောလောဆယ်တော့ ဖိလိပိုင်က မက္ကဆီကိုနဲ့ ယူအက်စ်က ၀က်သားတွေ တင်ပို့တာကို ခဏ ပိတ်ထားတယ်ပြောတယ်"
"ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မက္ကဆီကိုအတွက် ၂၅သန်းချေးငွေထုတ်ပေးပြီး ရေရှည်တွက် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုနှိမ်နင်းဖို့ သန်း၁၈၀လဲ ထုတ်ပေးမယ်ကြားတယ်"
"၀က်တွေကို ထိုးပေးတဲ့ဆေးတော့ရှိတယ်.. ဟဲဟဲ"
"ထုံးစံအတိုင်းပေါ့၊ လက်များများဆေး၊ အ၀တ်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ရှုးထဲမှာ နှာချေ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ မနမ်းနဲ့ ခုတလော၊ နှာခေါင်းကိုအုပ်ထား"
"နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲနေတဲ့ ရည်းစား သို့မဟုတ် ယောင်္ကျား သို့မဟုတ် မိန်းမ မက်ဆီကိုကပြန်လာရင်ကော မနမ်းရတော့ဘူးလား"
"နှာခေါင်းအုပ်ထားလို့ သေချာမှာလား၊ နှာခေါင်းအုပ်မှာ မမြင်နိုင်တဲ့ အပေါက်တွေအများကြီး"
"မင်းကူးချင်ရင် နမ်းလေ နမ်းချင်တဲ့သူတွေကို လိုက်နမ်းလို့ရတယ်"
"ငါတော့ မကြောက်ဘူး၊ ငါတို့ပြည်နယ်မှာလောလောဆယ် ကေစ်၂ခု ဆိုပေမယ့် mild case တွေပါ"
တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောသံတွေက ဆူညံနေသည်။
ကော်ရစ်ဒါကြမ်းပြင်တွေပေါ်က ကော်ဇောတွေပေါ်မှာ လျှောက်ပြန်ဖိနပ်သံတွေ တရှပ်ရှပ်ကြားနေရသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်တွေ လေထဲမှာ ပျံ့နေကြသည်။
ပုံကို ဒီက ရပါသည်ရှင်..
ဟင်…ထိုင်းမှာက သူတို့အတွက် ၀က်သား မပါရင်မပြီး ကျနော်နေတဲ့ အိမ်ဆို ၀က်သားက တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့ ရောချက် ။ ၀က်သားကိုကြွပ်ကြွပ်ကြော် တကယ်ပဲ ကျနော်နေနေတဲ့ ၃ နှစ်တာအတောတွင်း ၀က်သားမပါနပ်မရှိဘူး ဒီမှာ ဘာမှမကြားသေးတာလားမသိ ။ သတင်းဆိုးပဲ :( မြန်တယ်ဆိုတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ၀က်သားမစားတော့ဘူး ။ကျေးဇူး ဒီပို့စ်လေးအတွက်။ Comment by မောင်မျိုး — April 27, 2009 @ 7:43 pm
မနေ့ကတင် အလုပ်ပိတ်ရက်ဆိုပြီး Pork Chop ကို ခရမ်းသီးနှပ်နဲ့ ချက်ထားတာ. အခု မလေးရဲ့ ပို့စ်လေးဖတ်ရတော့ ညစာတောင်မစားရဲတော့ဘူး…
အဲလောက်တောင်ဖြစ်လှတာ. ၀တ်မှုန်တွေ ကြဲချနေတဲ့ ချယ်ရီပင်အောက်မှာ ၀က်သားတုတ်ထိုးကို သွားစားပစ်မယ်. ပြီးရင် ဘလော့ဂ်လောကကြီးကို ဘိုင့်ဘိုင်ဆိုပြီး ထားခဲ့တော့မယ်. ဟတ်ဟတ်…
စတာပါ. မလေး တော်တော်အလုပ်များမှာပဲနော်. တိတ်ကစ်အီးဇီးဗျာ…
Y. Comment by Yan — April 27, 2009 @ 8:18 pm
ပုန်းရည်ကြီးနဲ့ဝက်သားချက်ထားတာကိုဒီညစားမလို့ဟီး Comment by ဒေါင်းမင်း — April 27, 2009 @ 11:42 pm
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တန်ပြန်မူက တခုပြီးတခု လာနေသလိုပဲနော်။
Comment by အပြုံးပန်း — April 28, 2009 @ 5:30 am
အဲ… ခုတစ်လောနေ့တိုင်း ၀က်သားပဲစားနေမိတယ်… ကြက်စားရတာညည်းငွေ့လာလို့ဆိုပြီး… ခုချိန်ကစပြီးသတိထားစား ရတော့မယ် :D
Comment by Phu Phu — April 28, 2009 @ 8:24 am
အား………………………………. နေ့လည်ကမှ ၀က်သားကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် စားခဲ့တာ
ဒါမျိုးကျ ကိုယ့်အမျိုးတွေကိုယ် သတိမပေးဘူး ……. ဆိုးလိုက်တာနော်……….. ဘယ့်နှယ့်လုပ်မတုန်း
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား — April 28, 2009 @ 11:59 am
ဒီအကြောင်းတော့ ခုတလော လူပြောများနေတာပဲ။ မြန်မာပြည်များ ရောက်ရင်တော့ ဒုက္ခ။
Comment by ပုံရိပ် — April 28, 2009 @ 6:22 pm
Nay kong aung nay naw!
Ma Lay pyaw shwin par zay……
Comment by lynda — April 29, 2009 @ 4:39 pm
လူတုပ်ကွေးလာရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ… :(
Comment by Pinkgold — April 30, 2009 @ 1:14 am
မင်္ဂလာပါ မမ။ နေကောင်းလား၊ ဘာတွေလုပ်နေလည်း မမ မတွေ့တာကြာပေါ့။မမပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။
Comment by thumalay — May 1, 2009 @ 8:53 pm
အစ်မ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ဝက်သားမစားဘူးအစ်မ။ အစ်မရေ ရောဂါတွေကလည်းအမျိုးမျိးနဲ့ထူပြောလိုက်တာနော်။ အစ်မရောနေကောင်းလား။ ကျန်းမာပျော်ရွင်ပါစေ။
Comment by tawtharlay: — May 2, 2009 @ 6:35 pm |
Comment by mg yaw — May 4, 2009 @ 9:17 pm |
Comment by ကိုမာန်ထက် — May 4, 2009 @ 9:30 pm
လာလည်သူ စာရေးဖော်စာဖတ်ဖော် မောင်နှမများအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ မကြာခင် ပိုစ်အသစ်တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်… လောလောဆယ်တော့ ရှားရှားပါးပါးနေရောင်အောက်မှာ လိပ်တွေ၊ဖားတွေ၊ဗျိုင်းတွေ၊ငါးတွေကို လိုက်ချောင်းနေပါတယ်။.. ကွန်ပြူတာရှေ့ မကြာခင်ပြန်လာပါမယ်..
Comment by မလေး — May 5, 2009 @ 12:09 am
စဝိုင်းဖလူ အတွက် ပို့တွေ ရေးထားပါတယ်။ အချိန်ရရင် စိတ်ဝင်စားရင် လာဖတ်စေချင်ပါတယ်။
Comment by ဆောင်း — May 7, 2009 @ 2:40 am
ဝက်နှာစေးရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့ စ်တင်ထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် လာဖတ်စေချင်ပါတယ်။
Comment by ဆောင်း — May 7, 2009 @ 2:48 am
ကော်မဲန် ပေးလို့ မရပါလား
Comment by ဆောင်း — May 7, 2009 @ 2:50 am
Comment by ko hein — May 7, 2009 @ 8:58 am
ဆောင်း.. လင်ခ့်တွေပေးသွားတာ ကျေးဇူးညီမ၊ ညီမကော့မန့် spam ထဲရောက်နေလို့ အမပြန်တင်ထားပေးပါတယ်။
ko hein .. ကျေးဇူးပါ ကိုဟိန်း
Comment by မလေး — May 7, 2009 @ 2:27 pm
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:47 AM